Oceania မော်ကွန်း - ထို rayhab
50 ရာခိုင်နှုန်းကိုပစ်မှတ်မြို့တော်ရဲ့လမ်းရထားကွန်ယက်အားလုံးနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်အပေါ် running, မဲလ်ဘုန်း၌အဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်၏မြို့တော်တိုးမြှင့်ဖို့ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကိုပစ်မှတ်ထားကြ၏။ ခေါင်းစဉ်မဲလ်ဘုန်းမြို့နှင့်အတူသြစတြေးလျအတွက်ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့, နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်နဲ့စီးပွားရေးအပေါ်မွို့၌တစ်ခုလုံးကိုလမ်းရထားကွန်ရက် [ပို ... ]
သံသတ္ထုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီသြစတြေးလျအတွက်ရီယို Tinto ကကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးမီးရထားစက်ရုပ်နှင့်အတူအပြည့်အဝ automated ရထားလမ်းကွန်ယက်ကိုစစ်ဆင်ရေးထဲသို့သွင်းထားခဲ့ကြသည်။ အကြောင်းကို 800 ကီလိုမီတာအရှည်နှင့်အတူအနောက်တိုင်းသြစတြေးလျရဲ့ Pilbara ရထားလမ်းကွန်ယက်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ရထား, [ပို ... ]
ထိန်းချုပ်မှုမောင်းသူမဲ့ကုန်တင်ရထားထဲကသြစတြေးလျရဲ့ Tasmania ပြည်နယ်အတွက် Devonport မြို့အလားအလာဘေးအန္တရာယ်ကိုရှောင်ရှားခဲ့ပါတယ်ဖယ်ရှားလွဲချော်ရပ်တန့်။ အဆိုပါ Tasmanian ရဲတပ်ဖွဲ့ဖြင့်ကြေညာချက်အရ, လွဲချော်ရပ်တန့် Devonport မောင်းသူမဲ့ကုန်တင်ရထား၏တာဝန်အနီးဆိပ်ကမ်းအဖြစ်ထိန်းချုပ်မှုထဲကနှင့်ကိုလညျးမတားဆီး [ပို ... ]
ခရီးသည်ဒဏ်ရာရရှိ 16 မှချုပ်ထားသည့်အတားအဆီးနှိပ်၏ရလဒ်အဖြစ်ဆစ်ဒနီ, သြစတြေးလျ၏အနောက်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ Richmond ဘူတာရုံစတင်နိုင်ရန်ချဉ်းကပ်မီးရထားခရီးသည် download လုပ်ပါ။ New South Wales လုပ်ငန်းခွင်မတော်တဆမှု (NSW) ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့, အနည်းငယ်သက်ရောက်မှုအားဖြင့်ဒဏ်ရာရခရီးသည်အပေါ်မှတ်ချက်တွေ 16 [ပို ... ]
သြစတြေးလျအတွက်ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးမီးရထားပင်3ကီလိုမီတာသူတို့ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးစတင်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးအပြည့်အဝရထားန်ထမ်းသြစတြေးလျအတွက်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို အသုံးပြု. စတင် Byron ဂလားပင်လယ်အော်ရထားလမ်းကုမ္ပဏီ။ ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးအပြည့်အဝနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးရထားန်ထမ်း [ပို ... ]
ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးမောင်းသူမဲ့ရထားအထွက်တောင်တက်စတင်: ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး Full-စုံတဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရထားသုံးပြီးစတင်တရုတ်နိုင်ငံအခြေစိုက်သတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီရီယို Tinto ။ သတ္တုတွင်းကဏ္ဍအပြင်ဘက်ကုမ္ပဏီများကဤလှုပ်ရှားမှု၏မတူညီသောကဏ္ဍထည့်သွင်းရန်မျှော်လင့်နေသည်။ မီးရထား [ပို ... ]
Dayton, အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်ကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Moovit များအတွက်အရေးပါသောမှတ်တိုင်ညွှန်ပြ, ကဆက်ပြောသည်ကြောင့်သင်လောကxnumx'üncတမြို့လုံးကဆက်ပြောသည် Moovit လူကြိုက်အများဆုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး application ဖြစ်ပါတယ်သောကြေငြာချက်နှင့်အတူယနေ့ကမ်ဘာကျော်ကအားလုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ဖို့လိုအပ်တစ်ခုတည်းသောလျှောက်လွှာကြောင်းကိုသက်သေထူနေသည် [ပို ... ]
အဘယ်အရာကိုစစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုစေသည်မကြာခဏကဲ့သို့နည်းနည်းအမှုအရာ၏ရလဒ်အဖြစ်လာ: Atmar အားဖြင့်ကလေးများသည်နံနက်တိုင်းကျောင်းကရထားကိုသွားနိုင်သလား Powered ။ အနောက်တိုင်းသြစတြေးလျတွင်နေထိုင် Punm တိုင်းရင်းသားအသိုင်းအဝိုင်း, အမြိုးသားအနှိမ့်ချစည်ကနေရထားနဲ့ကျောင်းကိုသွားရ [ပို ... ]
ဓါတ်ရထားနှင့်ထရပ်ကားသြစတြေးလျ 29 ဒဏ်ရာရသူများတွင်တိုက်မိ: မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်တိုက်မှု၏ရလဒ်အဖြစ်လမ်းရထားနှင့်ကုန်တင်ကား, သြစတြေးလျ 29 လူတွေဒဏ်ရာရအစီရင်ခံခဲ့သည်။ မတော်တဆ, 8.00 အတွက်မဲလ်ဘုန်းမြို့တိရစ္ဆာန်ရုံဒေသစံတော်ချိန်အဆင့်ကူးအနီးဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ မတော်တဆမှုအတွက်ထရပ်ကားမောင်းသူ [ပို ... ]
ကလေးငယ် Peron ရထားအဖြစ်စစ်သွေးကြွ: ကလေးလေး istasyoun ဆစ်ဒနီရဲ့ Cronulla မီးရထားရထားပလက်ဖောင်းအကြားကျဆင်းခဲ့သည်။ ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့အခိုက်အနေဖြင့်ယခုအချိန်တွင်မှအဖြစ်အပျက်လုံခြုံရေးကင်မရာများ။ ဆစ်ဒနီ, သြစတြေးလျ, Cronulla ဘူတာရုံစတုရန်းထဲမှာ, ဖြစ်ရပ်ထံမှလက်ခံရရှိသတင်းအချက်အလက်များအရ [ပို ... ]
သြစတြေးလျ, Granville ရထားဘေးအန္တရာယ်များအတွက်တောင်းပန်မှကြိုတင် 40 နှစ်ပေါင်း: New South Wales (NSW) ပြည်နယ်အစိုးရတစ်နှစ်အကြာတွင် 40 အဆိုပါ Granville ရထားဘေးအန္တရာယ်အတွက်ချစ်ရသူကိုဆုံးရှုံးသူမိသားစုများအားတောင်းပန်။ ဇန်နဝါရီလ 18 1977 ၏ကြေကွဲဖွယ်ဖြစ်ရပ်များအတွက်ခရီးသည်ရထား [ပို ... ]
ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် TCDD သြစတြီးယားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို
TCDD, သြစတြီးယားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကြိုဆို: TCDD နှင့်အတူသြစတြီးယားအတွက်ရထားလမ်းကဏ္ဍတွင် operating ကုမ္ပဏီများမှကိုယ်စားလှယ်များအကြား, အစည်းအဝေးတူရကီရထားဘူတာမျှော်စင်စားသောက်ဆိုင်Behiç Erkin ခန်းမထဲမှာကျင်းပခဲ့သည်။ သြစတြီးယားနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးဒေါက်တာ၏ဖက်ဒရယ်သမ္မတနိုင်ငံအစည်းအဝေး Klaus Wölfer, TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ [ပို ... ]
သြစတြေးလျပါ့လေဆိပ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဘဝအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်တစ်ဦးကလွန်: Forrestfield လုပ်ခံရဖို့ဖော်ပြထားခဲ့သည်အသစ်တစ်ခုရထားလမ်းနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပါ့လေဆိပ်များ၏အနောက်သြစတြေးလျဌာနကမကြာသေးမီကဖန်ဆင်းထားတဲ့ကြေငြာချက်၌။ လိုင်း၏အဓိကအကျင့်ကိုကျင့်လေဆိပ် Salini Impregilo သွားလွယ်ကူချောမွေ့ပါလိမ့်မယ် [ပို ... ]
Bombardier သြစတြေးလျရထားရောက်ရှိ: Bombardier ကုမ္ပဏီဖေဖော်ဝါရီလ 16 ဘရစ္စဘိန်း၏သြစတြေးလျမြို့တော်ကိုရောက်ရှိသြစတြေးလျ၏မီးရထားများအတွက်အသစ်ကလျှပ်စစ်ရထား၏ပထမဦးဆုံးထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ခရီးသည်ရထားသြစတြေးလျကွင်းစ်လန်၏အရှေ့တောင်အစေခံမည်xnumx'şarl 75 အပိုင်းပိုင်းလှည်းအဖြစ်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ Bombardier, [ပို ... ]
သြစတြေးလျရဲ့မြို့တော်ကင်ဘာရာ, တိုးတက်ရေးပါတီအတွက်တစ်ဦးကနယူးက Metro လိုင်း
ကင်ဘာရာ, သြစတြေးလျရဲ့မြို့တော်တိုးတက်မှုများတွင်တစ်ဦးက New မြေအောက်ရထားလိုင်းဖြစ်ပါသည်: သြစတြေးလျရဲ့မြို့တော်ကင်ဘာရာသညျအလငျးရထားလမ်းစနစ်၏ပထမဦးဆုံးအဘို့အမျိုးမျိုးသောကုမ္ပဏီများပါဝင်သောတစ်ဦးလုပ်ငန်းစုနှင့်အတူဒီဇိုင်း-တည်ဆောက်စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစုအတွက်ကုမ္ပဏီများကင်ဘာရာယောဟနျသဟော်လန်မစ်ဆူဘီရှီများအတွက်အလင်းရထားလမ်းစနစ်ကဖန်တီး [ပို ... ]
Sulfuric Acid ရထားလွဲသွားစေ့စေ့စပ်စပ်
ရထားလွဲသွားတင်ဆောင်လာသော Sulfuric acid ကို: 200 ထံမှဆာလဗျူရစ်အက်စစ်တင်ဆောင်တထောင်လီတာကြောင့်အ2၏သြစတြေးလျကုန်တင်ရထားလွဲချော်ရပ်တန့်ကအရေးပေါ်ထိုဒေသတွင်ကြေညာခဲ့သည်ကီလိုမီတာ။ သြစတြေးလျရဲ့ Queensland ပြည်နယ်ပြည်နယ်၏အနောက်မြောက်ဘက်တွင်, 200 ထံမှဆာလဗျူရစ်အက်စစ်များတထောင်လီတာ [ပို ... ]
အဆိုပါရထားလမ်း (ဗီဒီယို) ဘဝနှင့်သေခြင်းရုန်းကန်
မီးရထားသံလမ်းသေခြင်းရုန်းကန်: သြစတြေးလျမှာရှိတဲ့မီးရထားဘူတာရုံမှာအရပျကို ယူ. ဖွင့်လှစ်ဖြစ်ရပ်လုံခြုံရေးကင်မရာများရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့နှလုံးသားများဆောင်ခဲ့သော။ Flemington ဘူတာရုံသည်ကစားစရာသည့်ပုဒ်များပေါ်သို့ပြုတ်ကျဖို့ကြိုးစားနေအနည်းငယ်မိန်းကလေး, ရထားနီးပါးအောက်မှာလာ၏။ လာမယ့်ရထားကိုသတိပွုမိ [ပို ... ]
မဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်သပိတ်ပေါ်မယ့်မီးရထားဝန်ထမ်း: မဲလ်ဘုန်းမြို့ရထားလမ်းအလုပ်သမားသမဂ္ဂ, တကနှစ်ရက်ကြာသပိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ယူခဲ့ပါတယ်။ ရထားထဲမှာနှစ်ရက်ကြာသပိတ်၏ကျွမ်းကျင်သူများကသူတို့သည်မြို့အသွားအလာလေဖြတ်အောင်လုပ်ရန်နိုင်ဟုဆိုလျက်, မြို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အဓိကကျသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ရထားလမ်းဓါတ်ရထားနှင့်ဘတ်စ်ကားပြည်ထောင်စု, အ RTB [ပို ... ]
လက်မှတ်ထိုးဆစ်ဒနီမီးရထားခေတ်မီသဘောတူညီချက်: သြစတြေးလျရဲ့တောင်ပိုင်းရထားလမ်း၏ခေတ်မီအသစ်တစ်ခုသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုး။ Uniport UGL ရထားပို့ဆောင်ရေးနှင့်အတူစာချုပ်ထဲမှာ 96 သန်းဒေါ်လာ, သြစတြေးလျ, တောင်ဘက်သမ္မတအကြားလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။ 70% ugl'n ရထားလမ်း၏ခေတ်မီ၏လုပ်ငန်းစဉ် [ပို ... ]
10 ညီလာခံနှင့်ပြပွဲမီးရထားနှင့်မျှော်လင့်ထားသည့်ကြီးမားသောမဲပေးသူ ausrail, ပါ့, သြစတြေးလျတွင်ကျင်းပလိမ့်မည်သည့်နိုဝင်ဘာလ၏ရက်စွဲများအကြား 11-2014 2014 ။ အဆိုပါဖြစ်ရပ်နှစ်စဉ်ကွဲပြားခြားနားသောမြို့ကြီးများတွင်ကျင်းပသြစတြေးလျတိုက်ကြီးဝိုင်းထဲမှာအကြီးဆုံးရထားလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သြစတြေးလျအတွက်လှုပ်ရှားမှုများ [ပို ... ]
ရဲ့မြေအောက်ရထား (ဗီဒီယို) တွင်ပိတ်မိနေသည့်လူသည်လက်လူကိုဖြစ်စို့
သြစတြေးလျ၏အလားတူ marmaray ပုံရိပ်တွေမှ လာ. တူရကီအတွက်မကြာခဏ Metrobus ပျက်ကွက်, မြေအောက်ရထား: ရဲ့မြေအောက်ရထားထဲမှာပိတ်မိနေသည့်လူသည်လက်လူကိုဖြစ်ကြပါစို့။ စည်းလုံးညီညွတ်မှုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ် '' ပစ်လက်က 'မြေအောက်ရထားစိတ်ဝင်စားဖို့အတွက်ခြေထောက်ပိတ်မိခရီးသည်ရာနဲ့ချီသည်။ သြစတြေးလျ [ပို ... ]
ကာဇက်စတန်ရဲ့ပထမဆုံးရထားလမ်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ Siemens သြစတြီးယား-based Siemens Metals Technologies ကအားဖြင့်ထောက်ပံ့ပါလိမ့်မည်ကာဇက်စတန် Aktobe ရထားနှင့်ပုဒ်မအလုပ်လုပ် LLP အခြေစိုက်ကြေညာလိုက်ပါတယ်အဆိုပါရထားလမ်းနှင့်ပုဒ်မကြိတ်ထောက်ပံ့ပါလိမ့်မယ်။ နှစ်ပတ်လည်စွမ်းရည်၏ 430.000 မက်ထရစ်တန်ချိန်ရှိပါတယ် [ပို ... ]
Eskisehir အတွက်တူရကီ Biggs အတွက်တူရကီမှကြှနျုပျတို့ကိုတင့်တယ်မော်ဒယ်သြစတြေးလျသံအမတ်ကြီးများအတွက်သြစတြေးလျနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအဆင့်မြင့်မြန်နှုန်းရထားစနစ်: တူရကီမှာ "အမြင့်မြန်နှုန်းရထားစနစ်, ကျွန်ုပ်တို့၏များအတွက်ကောင်းမွန်သောစံပြထိုကြောင့်ငါနိုင်ငံခြားရေးရေးရာသြစတြေးလျန်ကြီးဌာန၌ငါ့မိတ်ဆွေတွေကိုဆိုသညျကား, ထို [ပို ... ]
မဟုတ်မှသာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှခွဲဝေမှုများနှင့်ကွန်ရက်တစ်ခုထူးချွန်ပလက်ဖောင်းများကိုဖွဲ့စည်းရထားလမ်းစနစ်ကဖြစ်ရပ်များအပေါ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူသြစတြေးလျ, ထုတ်လုပ်သူများနှင့်အော်ပရေတာကနေ Plus အားausraıl 2013 ရထားလမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များ။ Plus အား ausrail နိုဝင်ဘာလ 2013 26 28-2013 ရက်စွဲများ [ပို ... ]
ရထားလမ်းစနစ်များလုပ်ဆောင်ချက်: 10 ။ ဆစ်ဒနီ - မီးရထားပေါ်တွင်ရံဖန်ရံခါလေ့လာရေး World Congress တွင်
ကမ်ဘာပျေါတှငျနောက်ဆုံးပေါ်တီထွင်မှုမြှင့်တင်ရန်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရထားလမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းများမီးရထားသုတေသနလေ့လာရေးအပေါ် World Congress တွင်, ထိုဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်လဲလှယ်မှုအတွက်ဦးဆောင်သည့်နိုင်ငံတကာဖိုရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ 10 ။ ဆစ်ဒနီ, သြစတြေးလျအတွက်နိုဝင်ဘာလအတွက်မီးရထား 25-28 2013 အပေါ်ရံဖန်ရံခါလေ့လာရေး World Congress တွင် [ပို ... ]
ရထားလမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးညီလာခံ 2013 - မီးရထားအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးညီလာခံမဲလ်ဘုန်းမြို့သြစတြေးလျအတွက် 05-07 2013 မတ်လအကြားကျင်းပပါလိမ့်မည်။ 2013 မီးရထားအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးညီလာခံအသစ်သောအတွေးအခေါ်များကိုဖွံ့ဖြိုးဖို့နဲ့ဖောက်သည်မျှော်လင့်ချက်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်တွေ့ဆုံရန်ဆန်းသစ်နှင့်တိုးတက်သောနည်းလမ်းများပူဇော်နိုင်ရန်အတွက် [ပို ... ]
ရထားလမ်းဖြစ်ရပ်များ: 2013 ရထားထိန်းချုပ်ရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များညီလာခံ - ဆစ်ဒနီ
2013-19 မတ်လကနေရထားထိန်းချုပ်ရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များညီလာခံ 21 2013 ဆစ်ဒနီ, သြစတြေးလျတွင်ကျင်းပလိမ့်မည်။ ရထားထိန်းချုပ်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲစနစ်များကိုkatlılmopertörထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အတူကြွယ်ဝပြည့်စုံလျက်ရှိသောရဲ့ contents နှင့်အတူရထားလမ်းနှင့်ရထား၏အရေးပါမှုအပေါ်သုတေသနပြုများ၏ဘာသာရပ်ဖြစ်လိမ့်မည် [ပို ... ]
သြစတြေးလျအတွက် Pilbara ရထားလမ်းစီမံကိန်းအားခြောက်လရွှေ့ဆိုင်းခဲ့သည်
အဆိုပါ Pilbara အတွက်ကျင်းပမည့် QR အမျိုးသား, အနောကျပိုငျးသြစတြေးလျအတွက် Atlas သံနှင့် Brockman သတ္တုတွင်းဖက်စပ်, ကုန်ကျစရိတ်တိုးမြှင့်, variable ကိုသံသတ္တုရိုင်းစျေးနှုန်းများသံသတ္တုရိုင်း Pilbara ရထားလမ်းစီမံကိန်းအားတန်ဖိုးရှိ 3,5 ဘီလီယံကို $ စီစဉ်ထားခြင်းနှင့်ကုမ္ပဏီ၏မီးရထားလိုင်းကပြောပါတယ် [ပို ... ]
Ansaldo STS သြစတြေးလျအတွက်မီးရထားလမ်းအချက်ပြများအတွက်တင်ဒါအနိုင်ရရှိလိုက်ပြီ
Ansaldo STS အနောက်တိုင်းသြစတြေးလျရဲ့ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Pte ပါ့တန်ဖိုးရှိစနစ်တပ်ဆင်၏ 14.7 ကီလိုမီတာ extension ကိုများအတွက်အချက်ပြမြို့ပြမီးရထားလမ်းနုချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ် 17.900.000 ယူရိုသန်း (က $ 7,5) ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်အေဂျင်စီ။ Ansaldo STS သစ်ကို [ပို ... ]
ရထားလမ်းဖြစ်ရပ်များ: RISSB အမျိုးသားမီးရထားအလုပ်ရုံကတ်ကြေး 2012 - ကင်ဘာရာ
RISSB အမျိုးသားမီးရထားအလုပ်ရုံကတ်ကြေး 29 / 11 / 2012 - 30 / 11 / 2012 ရက်စွဲများအကြားကင်ဘာရာအတွက်သြစတြေးလျတွင်ကျင်းပလိမ့်မည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်နှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကဒီနေရာကိုနှိပ်ပါပေးပါ: Raillynews မီးရထားသတင်းများနှင့်အခြားဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ haberlerrayl စနစ်ကအကျိုးစီးပွားဖြစ်နိုင်သည်: [ပို ... ]